एक अपतटीय खाता के हो र म किन एक हुनु पर्छ?
अफशोर बैंक खाता: यो के हो? किन एक छ?
विचार गर्दा महसुस गर्न पहिलो कुरा अपतटीय बैंकिंग के यो सडकमा बैंकिंगसँग मिल्दोजुल्दो छ। तपाइँ तपाइँको खाता अनलाइन हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ तपाइँको खाता भित्र र बाहिर बैंक वायर ट्रान्सफर प्रसारण गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै अपतटीय बैंकहरु संग डेबिट कार्ड संग सम्बन्धित छ। थप रूपमा, बाहिरी सेवा कम्पनीहरूले अफशोर प्रीपेड डेबिट कार्डहरू प्रस्ताव गर्दछन् जुन तपाईं तपाईंको अफशो खातामा लिंक गर्न सक्नुहुनेछ।
जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, स्थानीय खातामा कागजी मुद्राको साना टुक्रा सम्मिलित हुँदैन जुन यो तपाईंको नामको साथ घन होलमा भरिन्छ। तपाईंको बैंक खाता केवल बैंकको नेटवर्कमा कम्प्युटर डाटा हो जुन विश्वभरि सर्भरहरूमा जगेडा गरिएको छ।
यदि तपाईं छुट्टीमा अर्कै देशको यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईं अझै आफ्नो खाता पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ, कोष फिर्ता, आदि। यस्तै प्रकार, तपाईंको बैंक खाता विदेशमा कम्प्युटर कोड हुन्छ; सम्भावित ठीक वैश्विक कम्प्युटर नेटवर्कमा तपाईंको मित्रवत छिमेकको बैंकको रूपमा ब्याक अप गरिएको छ।
त्यसो भए, फरक पर्दैन कि तपाईं कुनामा अथवा ग्रहको अर्को तर्फ हुनुहुन्छ। जे भए पनि, तपाइँको पैसा उहि ठाउँमा छ: एक ग्लोबल कम्प्यूटर नेटवर्कमा।
अफशोर बैंकिंग सुरक्षा
बैंक सुरक्षाको सम्बन्धमा, ध्यान दिनुहोस् कि त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डहरू छन् जुन बैंकहरूले पूरा गर्नै पर्छ। त्यो हो, बैंकले विदेशबाट निक्षेपकर्ताहरू स्वीकार गर्न सक्नु अघि यसले केही वित्तीय तनाव परीक्षण पास गर्नु पर्छ। उदाहरण को लागी, बेलिज, नेविस, कुक टापु, स्विजरल्याण्ड वा केम्यान टापुमा रहेको एउटा बैंकले अमेरिकी डलरमा तार स्थानान्तरण गर्न सक्दछ, सामान्यतया अमेरिकाको संवाददाता बैंक लिनु पर्छ। एक संवाददाता बैंकिंग सम्बन्ध प्राप्त गर्न केहि आवश्यकताहरू गर्दछ। उदाहरण को लागी, यो अमेरिकी संस्था लाई प्रमाणित गर्नु पर्छ कि यसको वित्तीय मजबूती अनुपात सख्त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्दछ। यसका साथै सम्बन्ध कायम राख्न यी परीक्षणहरू निरन्तर रूपमा पास हुनुपर्दछ।
थप रूपमा, त्यहाँ यी प्रत्येक अधिकारक्षेत्र भित्र कडा सरकारी नियमहरू छन्। एउटा कडा र द्रुत आवश्यकता भनेको बैंकहरूले निक्षेपकर्ताहरूको सुरक्षा बीमा गर्न पर्याप्त पूँजी भण्डार कायम राख्नुपर्दछ। यसबाहेक, नियामकहरूले निरन्तर बैंकहरू अडिट गर्दछन्। यसले बीमालाई मद्दत गर्दछ कि बैंकहरू अनुपालनमा रहनेछन् र यी लोकप्रिय वित्तीय केन्द्रहरूको प्रतिष्ठालाई समर्थन गर्न। बैंक loansण र लगानीको लागि आवश्यक संख्या, रकम र सुरक्षामा प्रतिबन्धहरू छन्। त्यहाँ त्रैमासिक रिपोर्टिंग आवश्यकताहरू छन्। यसका साथै बैंकका अधिकारीहरूले गहन पृष्ठभूमि जाँचहरू पारित गर्नुपर्नेछ उनीहरूले संस्थासँग निर्देशक प्राप्त गर्नु अघि।
मानक र नियमहरु
बैंकहरूको लागि त्यहाँ एक अन्तर्राष्ट्रिय नियामक फ्रेमवर्क छ। यी मापदण्डहरू हुन् जसका लागि सबै बैंकहरूले विदेशमा कोष सार्नको लागि आज्ञापालन गर्नुपर्छ। यसले बासेल III समावेश गर्दछ। बासल III मानकहरूको विस्तृत सेट हो। बैंकिंग पर्यवेक्षणमा रहेको बासेल कमिटीले उद्योगको लागि यी मानकहरू विकास गर्‍यो। यसको उद्देश्य विश्वभरि बैंकि industry उद्योगको नियमन, पर्यवेक्षण र जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ र एकीकृत गर्नु हो। यी उपायहरूको उद्देश्य निम्न गर्नु हो;
स्रोतलाई वास्ता नगरी, वित्तीय र आर्थिक तनावबाट उब्जाउने झुण्डहरू अवशोषित गर्न बैंकि industry उद्योगको क्षमता सुधार गर्नुहोस्
जोखिम व्यवस्थापन, अपरेशन र निरीक्षण सुधार गर्नुहोस्
बै'्कको पारदर्शिता र खुलासाहरूलाई सुदृढ पार्नुहोस्
त्यहाँ तरलता कभरेज अनुपात र जोखिम अनुगमन उपकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू छन् जुन बैंकहरूले गर्नुपर्दछ। यसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि बैंकि institution संस्थासँग पर्याप्त मात्रामा अनियन्डेम्बेड उच्च-गुणवत्ता तरल सम्पत्ति (HQLA) छ। यी सम्पत्तिहरू हुन् जुन बैंक सजिलैसँग र तुरून्त नगदमा रूपान्तरण गर्न सक्दछ। संस्थाहरूले त्यसपछि calendar० क्यालेन्डर-दिन तरलता तनाव परिदृश्यको लागि यसको तरलता मागहरू पूरा गर्न निजी बजारहरूमा जान सक्छ। त्यहाँ नेट स्थिर कोष अनुपात आवश्यकताहरु छन्। यी मापदण्डहरूले बैंकहरूलाई छोटो अवधि र दीर्घकालीनको लागि एक सुरक्षित कोष प्रोफाइल राख्न आवश्यक छ।
बैंकिंग अफशोर सामान्य छ
अफशोर बैंकि very धेरै सामान्य छ। कथित रूपमा २.2.7 मिलियन अमेरिकी नागरिकहरू छन् अपतटीय खाताहरु। अफशोर बैंकि just शीर्ष १% मात्र होइन। बैंकिंग अपतटीय जो कोहीलाई उपलब्ध छ र सबैलाई विभिन्न फाइदाहरू लिन चाहान्छन्। धेरै विदेशी बैंकहरु न्यूनतम निक्षेप न्यूनतम प्रस्ताव गर्दछ। यसैले, तिनीहरू एक अपतटीय अपतटीय सेट अप गर्न को लागी कसैको लागि एक मनमोहक विकल्पको लागि गर्छन्।
यसबाहेक, एक को फाइदा अपतटीय बैंक खाता वैकल्पिक लगानी अवसरहरू भन्दा बाहिर जानुहोस् र तपाईंको सम्पत्ति लुकाईरहेको छ। यी सुविधाहरूले औसत व्यक्तिलाई असर गर्दछ र तपाईंको दैनिक बैंकिंग अनुभवमा ठूलो सुधार गर्न सक्दछ। सुरक्षा, पहुँच योग्यता, सुविधा र मनको शान्ति को मामला मा, यो अपतटीय बैंकिंग आदर्श समाधान छ जस्तो देखिन्छ। तपाईंको बैमेनी सरकारबाट लुक्नको लागि विदेशी बैंकि ,लाई केहि टाढा, आदर्शवादी कर चोरी योजना भनेर सोच्ने दिनहरू भयो। यसको ठीक विपरीत, यो कानुनी, नैतिक र नैतिक हो जब सही तरिकाले गरिन्छ। यसका अतिरिक्त, यो एक वास्तविक, व्यवहार्य, र टिकाऊ विकल्प हो जसले यसको फाइदा लिन सबैलाई तयार छ।
किन अझ बढी सिक्ने?
धेरै अमेरिकीहरू अफशोर बैंकि really वास्तवमा के हो भनेर सचेत छैन। तर हाय, अब यसबारे सत्य सिक्ने समय आइसकेको छ। अपतटीय बैंकि भनेको तपाईं बस्ने ठाउँमा भन्दा भिन्न राष्ट्रमा बै different्कि system प्रणालीको उपयोग हो; सब भन्दा अनुकूल एक मजबूत, स्थिर क्षेत्र मा। बैंकिंग अफशोरमा असंख्य वित्तीय र कानूनी लाभहरू छन्। यो doldrums मा एक अर्थव्यवस्था को कारण हुन सक्छ। यो एक कमजोर संघीय रिजर्भ प्रणालीको कारण हुन सक्छ जुन सरकारमा गहिरो debtणमा डुबेको छ, जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा। वैकल्पिक रूपमा, यो वाशिंगटन म्युचुअलको असफलता जस्तै हुन सक्छ, ठूलो पूँजीकृत बैंकले तनाव परीक्षणमा असफल भयो।
यसैले, यो एक वैध विकल्प को रूप मा अफशोर बैंकिंग जाँच शुरू गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ। अमेरिकी र धेरै यूरोपीय बैंकि systems प्रणालीहरूको ओभरभलरेजको साथ, उत्तम रूपमा, तपाईं यी कारणहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन हामी तल छलफल गर्नेछौं।
बैंकिंग अपतटीय तपाईंको बचतको लागि मुद्रा विविधीकरण प्रदान गर्दछ। यो सुरक्षित, स्थिर दीर्घकालीन लगानी पोर्टफोलियो कायम राख्नका लागि धेरै उपयोगी छ। धेरै थोरै देशीय बैंकहरूले विविध मुद्राहरू समात्न विकल्पहरू प्रस्ताव गर्छन्। विदेशमा सम्पत्ति बिभिन्न मुद्रामा समात्नाले एकलाई मुद्राको उतार चढावमा जम्पको फाइदा लिन अनुमति दिन्छ। / / ११ का विपत्ति पछि, धेरै मानिसहरूले क्यानाडाको बैंक खाता खोले र अमेरिकी डलर क्यानाडाली डलरमा रूपान्तरण गरे। धेरैले अमेरिकी डलर ट्या and्क गरेपछि र क्यानडालीले एक जनाको सुदृढिको रूपमा hands०% लाभ कमाए। त्यसो भए, विभिन्न मुद्रालाई समात्नाले लगानीलाई विविधीकरण गर्न सक्दछ, निश्चित बजारमा उच्च प्रतिफलको प्रस्ताव गर्दछ र कम जोखिमहरू।
यसले आम्दानीको विविध प्रवाहको लागि अनुमति दिन्छ। सन् २०० 2008 मा अमेरिका मन्दीको बेलामा एशियाको बजार उफ्रिँदै थियो भन्ने कुरालाई पनि विचार गर्नु उचित छ। तपाईंको व्यवसाय सीमित गर्‍यो घरेलू हिसाबले तपाईं प्रतिबन्ध लगाउनुहुन्छ। त्यसो भए, तपाईले अर्थव्यवस्थाको फाइदा उठाउन चाहानुहुन्छ जबकि तपाईको घरेलु अर्थतन्त्र नहुन सक्छ। वास्तवमा तपाईले एक भन्दा बढि विदेशी खाता स्थापना गर्न विचार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै रूपमा, तपाईं आफैंलाई निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय विदेशी बैंकिंग कानूनहरूको पूर्ण फाइदा लिइरहनुभएको छ। उदाहरणका लागि स्विट्जरल्याण्डमा बैंकहरू पनि लगानी व्यवस्थापन फर्म हुन्। स्विस बैंकिंग दुनिया मा केहि शीर्ष पैसा प्रबन्धकहरु संग आउँछ। त्यसोभए, संस्थामा वित्तीय योजनाकारले पोर्टफोलियो सुझाव दिन सक्छ जसले वृद्धि र सुरक्षाको एक ठूलो संयोजन प्रदान गर्दछ। अमेरिकाले ट्रेडहरूको संख्या सीमित गर्दछ जसमा एक दिनका व्यापारीले भाग लिन सक्छन्। व्यापार अफशोरले यो क्याप हटाउँछ।
अमेरिकाका बैंकहरूले सामान्यतया निक्षेपमा धेरै कम ब्याज प्रस्ताव गर्छन्। उदाहरण को लागी, वर्तमान बजार को दरहरु मा, यदि तपाइँ जनवरी मा $ 1,000 अमरीकी डलर जम्मा गर्नुहुन्छ, तपाइँले बर्ष को लागी मात्र $ 10 ब्याज बनाउन हुनेछ। केही आफ्नो बचत मा कुनै रकम बनाउन सन्तुष्टि, वा रोमाञ्च महसुस गर्न सक्छन्। जे होस्, जब तपाईं केहि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूसँग तुलना गर्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो निक्षेप अफशोरमा केहि महत्वपूर्ण उच्च ब्याज दरहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईंलाई केवल एक मात्र लाभको आधारमा खाता सेट अप गर्न पर्याप्त चासोको कुरा गरिरहेका छौं। अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स र फ्रान्स जस्ता स्थानहरूले तपाईंको निक्षेपमा न केवल ठूलो ब्याज दरहरू प्रस्ताव गर्न सक्छ, तर तिनीहरूमध्ये केहीलाई घर पनि सूचीबद्ध गरिएको थियो। सबैभन्दा सुरक्षित बैंकहरू विश्वभर।
पैसा द्रुत रूपमा सार्नुहोस्
तपाईंको सम्पत्तिहरूको विविधीकरणको साथ, सानो अपतटीय खाता भए पनि तपाईंलाई चाँडै सार्न मद्दत गर्दछ। अफशोर खाताधारकहरूको फण्डहरू सार्न लचिलोपन छ, आवश्यक छ भने। उदाहरण को लागी, तपाई त्यस्तो अवस्थामा हुन सक्नुहुनेछ जहाँ मुद्दा बाट सम्पत्ति सुरक्षा आवश्यक हुन्छ। थप रूपमा, तपाईंसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरूमा नियमित लेनदेन हुन सक्छ। यी दुबै आधारभूतहरू आफैंमा अमूल्य छन्।
यी लाइनहरूमा, हामी यो पनि जान्दछौं कि घरेलु बैंकहरूले प्राय: धेरै ठूला निकासीहरूको लागि धेरै सीमित कोषहरू हातमा राख्छन्। यसले सजिलैसँग तपाइँका सबै पैसाहरू द्रुत रूपमा पहुँच गर्न धेरै गाह्रो बनाउँदछ। चुनौती यो छ कि यहाँ असंख्य परिस्थितिहरू छन् जहाँ सम्पत्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा यस प्रकारको सीमितता घातक हुन सक्छ। किन यो महत्त्वपूर्ण छ? यहाँ किन छ। के तपाईं चाँडै आफ्नो रकम निकाल्न सक्दैन भने के हुन्छ? त्यो हो, पछाडि लाइनमा तपाइँसँग एक वकिल हुन सक्छ जो तपाइँको खाता फ्रिज गर्न चाहान्छ जब सम्म बैंकले यसलाई हस्तान्तरण गर्दैन।
त्यसोभए, एक खाता अफशोरमा पनी तपाईंको विपक्षीको हातहरू बन्द गर्दछ। तपाईं आफ्नो पैसा चाँडै सार्न सक्नुहुनेछ र / वा तपाईं सुरक्षाको लागि एक अपतटीय ट्रस्टी चरण पाउनुहुनेछ।
सायद अफशोर बैंकिंगको अधिक सामान्य गलत धारणाले कर मानिसबाट सम्पत्ति लुकाइरहेको छ। वास्तविकतामा, यो विरलै सत्य हुन्छ, किनकी अफशोर बैंकहरू कर प्रयोजनका लागि सामान्यतया पारदर्शी हुन्छन्। भनिएको छ, त्यहाँ अपतटीय खाता प्रयोग गर्दा सीमित गोपनीयता कायम गर्न केहि तरिकाहरू छन्। कुनै पनि अमेरिकी पुनर्स्थापना $ 10,000 अमेरिकी डलर वा अधिक, कुनै पनि समयमा, यो रिपोर्ट गर्नुपर्दछ। यद्यपि यो सम्भव छ कि $ १०० अमेरिकी डलर मुनि यसमा रिपोर्ट नगरिकन खाता रहेको छ। तथापि, तपाईले रिपोर्ट गर्नु पर्छ यदि तपाईं एक विदेशी खातामा हस्ताक्षरकर्ता हुनुहुन्छ भने। जे होस्, हामी तपाईंलाई तपाईको कर सल्लाहकारसँग कुरा गर्न सल्लाह दिन्छौं।
Safeest बैंकहरू अन्तर्राष्ट्रिय हुन्
एक अधिक सुरक्षित बैंकिंग अनुभव। अमेरिकी बैंकहरूलाई समर्थन गर्ने संघीय रिजर्भ प्रणाली, यसको फलस्वरूप, यस ग्रहमा सबैभन्दा बढी debtणले ग्रस्त देशद्वारा समर्थित छ। यसबाहेक, शीर्ष वित्त प्रकाशनहरूले विश्वभरि सुरक्षित बै banks्कहरूको सूची जारी गरेको छ; जसमध्ये कुनै पनि राष्ट्रिय अमेरिकी बैंक थिएन। पक्कै कुनै पनि होइन। ग्लोबल फाइनान्स म्यागजिन लिनुहोस्, उदाहरणका लागि, उनीहरूले प्रति वर्ष 50० सुरक्षित बैंकहरूको सूची जारी गर्छन्। अचम्म लाग्ने कुरा के हो भने यसले कुनै ठूलो अमेरिकी बैंकको उल्लेख गर्दैन। यस लेखनमा, केवल "सुरक्षित" सूचीमा अमेरिकी बैंकहरू तीन साना कृषि बैंकहरू हुन्, तिनीहरू 30०, 45 50 र at० नम्बरमा सूची गर्दछन्।
ग्लोबल मंगेतरका अनुसार, सुरक्षित बैंकहरू भएका देशहरू यहाँ छन्।
माथिको देशहरू मध्ये, स्विट्जरल्याण्ड र लक्जमबर्ग मात्र देश भ्रमण गर्न को लागी खाताहरू खोल्न हुनेछ। न्यूनतम निक्षेप पर्याप्त छन्। बैंकर अन्ततः तपाईं व्यक्तिगत रूप मा भेट्न आउनुहुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, तथापि, कम debtण देशहरूमा बै banks्कहरू भेट्टाउन सजिलो छ जुन तपाईंको पैसाको साथ जुवा खेल्दैन (र गर्दैन)। नतिजा स्वरूप, तिनीहरूले तपाइँको निकासी को लागी हात मा अधिक नगद राख्न मा सक्षम छन्। जब तपाईं यसलाई लगानीको मामलामा राख्नुहुन्छ, तपाईं कहाँ आफ्नो पैसा पार्क चाहनुहुन्छ? एक कम्पनी मा नगद मा पौडी खेल्ने? वा एक debtण मा डुब्यो? स्विजरल्याण्ड र लक्जमबर्ग जस्ता देशहरूमा कडा केन्द्रीय बैंकिंग नियमहरू छन्। सबै बैंक लेखा अभ्यासमा उनीहरूले "चेक र ब्यालेन्स" लागू गर्छन्। धेरै अन्य अफशोर बैंक र देशहरूमा समान प्रणालीहरू छन्। यी प्रणालीहरूले बैंक अफशोरमा खोजिरहेका व्यक्तिहरू यति सुरक्षित र ध्वनिपूर्वक गर्न सक्छन् भनेर सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ।
थप रूपमा, धेरै सम्पत्ति सुरक्षा विज्ञहरूले भनेका छन्, जब तपाईं अफशोरमा बैंक गर्नुहुन्छ तपाईं घरेलु हिसाबले मुद्दाहरूको लागि कम आकर्षक हुनुहुन्छ। त्यो हो, यदि तपाईं अफशोर खाताहरूमा तपाईंको सम्पत्तिहरूको एक हिस्सा बाँध्नुहोस् तिनीहरू तपाईंको विपक्षीलाई जफत गर्नको लागि कडा हुन्छन्। यो सबैको लागि चिन्ताको विषय नहुन सक्छ; तर यो याद राख्नुहोस् कि यदि कोही विदेशी खातामा बसिरहेका छन् भने कसैलाई तपाईंको खाताहरू स्नैपमा स्थिर गर्न अझ गाह्रो हुन्छ। दीर्घकालीन सुरक्षाको लागि, विशेषज्ञहरूले तपाइँको खातालाई एक अफशोर कम्पनी र / वा भरोसामा समात्न सिफारिस गर्छन्। यी उपकरणहरूमा धन होल्डिंगले मात्र गोपनीयता प्रदान गर्दैन। यदि अदालतले रकम फिर्ता फिर्ता माग गरेमा उनीहरूले पर्याप्त कानुनी सुरक्षा पनि प्रदान गर्न सक्दछन्।
एक अपतटीय खाता सेट अप गर्दै
यो सम्भवतः कुनै आश्चर्यको रूपमा आउँदैन। अमेरिकीहरूको लागि अपतटीय खाताहरू स्थापना गर्न झन् झन् गाह्रो हुँदै गइरहेको छ। यो जानकारी अत्यधिक प्रासंगिक छ। त्यसो भए तपाईका लागि उत्तम बैंक फेला पार्न कुनै अनुभवी पेशेवरलाई सोध्नु आवश्यक छ। त्यो हाम्रो सेवाले प्रदान गर्ने सेवा हो। हामीलाई थाहा छ कि कुन बैंकले विदेशी ग्राहकहरूलाई स्वीकार्छन्। हामी उत्सुक छौं कुन बैंकहरू जुन हामी सबैभन्दा शक्तिशाली र सुरक्षित हो भन्ने महसुस गर्दछौं र जुन सबैभन्दा आकर्षक सेवाहरू प्रस्ताव गर्दछ।
हेर्नको लागि केहि चीजहरू:
अमेरिकी ग्राहकहरूको लागि उपलब्धता। सबै बैंकहरूले अझै पनि अमेरिकी, क्यानेडाली र युरोपियन ग्राहकहरूलाई स्वीकार गर्दैनन्।
टाढैबाट खाता खोल्ने क्षमता। त्यहाँ केही विदेशी बैंकहरू छन् जुन ग्राहकलाई अनलाइन वा फोनमा खाताहरू खोल्न विकल्प छन्। स्वाभाविक रूपमा, तपाइँले कानुनी रूपमा आवश्यक तपाइँको क्लाइन्ट कागजातहरू पनि प्रदान गर्न आवश्यक छ। अन्य बैंकहरूलाई आवश्यक छ कि तपाईंले खाता खोल्नको लागि सीधा तिनीहरूको बैंकमा जानुहोस्। त्योले भने, ती बैंकहरूमध्ये केहीको आन्तरिक शाखाहरू छन्। त्यसकारण, केहि ले तपाईंलाई स्थानीय शाखा मार्फत विदेशी खाताहरू सेट अप गर्न अनुमति दिनेछ। समस्या यो छ कि अमेरिकी अदालतहरूको स्थानीय शाखामा अधिकार क्षेत्र छ। त्यसोभए यस्तो बैंक प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ जुन अमेरिकी स्थानहरूसँग सम्बन्धित छैन।
न्यूनतम। धेरै बैंकहरूले खाता खोल्नका लागि न्यूनतम जम्मा गर्नु पर्छ (जुन घरेलु र अन्तर्राष्ट्रियमा जान्छ)। त्यसोभए तपाईले न्यूनतम तपाईको कारण भित्र एक बैंक खोज्न चाहानुहुन्छ।
बैंकहरू जुन स्थानीय ग्राहकहरूको साथसाथै विदेशी ग्राहकहरू छन्। तपाईं निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि स्थानीयलाई सेवा प्रदान गर्ने बैंक राम्रोसँग छानबिन भइरहेको छ। एउटा बैंक जससँग केवल विदेशी ग्राहकहरू छन्, प्राय: "क्लास बी" बैंक भनिन्छ। यी बैंकहरू नियामकहरूले सजिलै बेवास्ता गर्न सक्दछन्। "कक्षा ए" बैंकहरूले सामान्यतया दुबै देशी र विदेशी जम्माकर्ताहरूलाई स्वीकार गर्न सक्दछन्।
धेरै विदेशी बैंकहरुसँग कडा गोपनीयता कानून छ र खाता जानकारी खुलासा गर्दैन। कर रिपोर्टिंग, तथापि, एक फरक मुद्दा हो। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू अमेरिकी बासिन्दाहरू र नागरिकहरूको लागि केहि फारमहरू फाइल गर्न जिम्मेवार छन्। त्यसो गर्नाले तिनीहरूलाई अमेरिकी कर नियमहरूको पालना गर्न मद्दत गर्दछ। जिम्मेवारि खाता होल्डरसँग पनि छ कि यसलाई राम्रोसँग रिपोर्ट गर्नुहोस्। एक अपतटीय खाता सेट अप गर्दा तपाईं पनि आधारभूत कर कानूनहरू दिमागमा राख्न चाहानुहुन्छ। यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, जे भए पनि, यो केवल सहयोगी जानकारीको लागि हो र कर सल्लाह होइन। यो परिवर्तनको विषय हो। त्यसो भए, पहिले इजाजतपत्र प्राप्त एकाउन्टेन्टबाट सल्लाह लिनुहोस्। भनिएको छ, यो सिफारिस गरिन्छ कि अमेरिकनहरु निम्न दिमागमा राख्नु पर्छ।
तपाईंले विश्वव्यापी आम्दानी रिपोर्ट गर्नुपर्छ। यो लागू हुन्छ यदि तपाईंले आफ्नो आयमा विदेशी करहरू तिर्नुभयो भने। यondन्डरमा पैसा राख्ने र मात्र करहरू तिर्ने जब तपाईं यसलाई फेरि १ 1964 ;XNUMX मा रोकिनुभयो। ठूला निगमहरू व्यापक सेयरधारकको आधारमा यससँग टाढा जान सक्छ; तर एक व्यक्ति वा नजिकबाट आयोजित कर्पोरेसन होईन।
तपाईंले कुनै पनि विदेशी बैंक खातालाई १०,००० अमेरिकी डलरभन्दा बढी रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ। यो तपाइँको आय रिपोर्ट को लागी पूरक हो। यदि तपाईंसँग १० हजार अमेरिकी डलर भन्दा बढी अफशोर खाता छ भने तपाईंले FBAR फाराम फाइल गर्नुपर्नेछ।
ब्याज आम्दानी। यदि तपाईंसँग कुनै ब्याज (आय, घाटा, लाभ, कटौती, आय, र वितरण) कुनै पनि विदेशी सम्पत्तिमा कर बर्षको अन्तिम दिन $ $०,००० अमेरिकी डलर वा वर्षको कुनै पनि समयमा $ ,50,000,००० अमेरिकी डलर भन्दा बढी छ भने, तपाईंले एउटा फाइल गर्नुपर्नेछ फारम 75,000 8928२XNUMX
दण्ड र अनुचित तपाईंको कर रिपोर्टिंग को लागी ब्याज। कर चोरीमा सीमितताको कुनै विधान छैन। जरिवाना १०,००० डलरदेखि सयौं हजारौं डलर सम्म हुन सक्दछ। कर चोरी, गलत रिपोर्टि,, र रिपोर्ट गर्न असफल हुँदा कडा जरिवाना लिन सक्छ। त्यसैले सबै कर कानूनहरूको पालना गर्न निश्चित हुनुहोस्।
सही निर्णय लिँदै
ती सबै बाहेक, तपाईंले यो कुरा मनमा राख्नु पर्छ कि कुनै पनि बैंक सबैका लागि उपयुक्त छैन। जबकि केही व्यक्तिलाई निकासीमा सजिलो पहुँचको साथ उच्च पूँजीकृत बैंकहरू आवश्यक पर्दछ, अन्यले "सम्पत्ति सुरक्षा" सुविधाहरू खोज्न सक्छन्।
लोकप्रिय विश्वासको विपरित, अपतटीय बैंकि्ग करहरू लुक्ने वा तपाईंको सम्पत्ति लुकाउने बारेमा होइन। यो तपाईंको व्यवसाय निर्माण गर्ने र भेदभावपूर्ण मुकदमेबाजीबाट सम्पत्तिहरू सुरक्षित गर्ने बारेमा बढी हो। त्यो हो, धेरै व्यक्तिहरूले अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूबाट लाभ उठाउनका लागि बस अफशोर खाताहरू स्थापना गर्दछन्।
ओन्शोर भन्दा अफशोर सुरक्षित गर्नुहोस्
समय बित्दै जाँदा वास्तवमा यो प्रश्न कम देखिन्छ "के मेरो लागि विदेशी बैंकि? छ?" र अधिक "के घरेलु बैंकि me मेरो लागि सही छ?" यो केहि फ्लोक छैन। यो हल्लाएको बैंकिंग प्रणालीको सीधा परिणाम हो। यो एक debtण मा सरकार द्वारा समर्थित एक प्रणाली हो; जनताको पैसाबाट जलेको सरकार।
यसै बीच, संघीय रिजर्भ शम्बलमा छ। यदि तपाईं अन्यथा सोच्नुहुन्छ भने, countriesण मा गहिरो छैन देशहरु मा बराबर एजेन्सी संग तुलना। निश्चित रूपमा प्रश्न अब अफशोर बैंकि safe सुरक्षित छ कि छैन भनेर छ। हामीले सोध्नु पर्ने प्रश्न यो हो। कुन व्यक्तिगत अपतटीय बैंक हामीले हाम्रो व्यक्तिगत, कानूनी, व्यवसाय, र वित्तीय लाभको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ?
अपतटीय बैंकिंग वित्तीय गोपनीयता वृद्धि को लागी अनुमति दिन्छ। विश्वभरका धेरै व्यक्ति र कम्पनीहरूले यी गोपनीयता बेनिफिटहरूको फाइदा लिन्छन्। अमेरिकी निवासीहरूले बैंकि people अफशोरमा यी व्यक्तिहरू र व्यवसायहरूको समान वित्तीय पुरस्कारहरूको मज्जा लिन सक्छन्।
तपाईंको पैसालाई सम्बन्ध विच्छेद, मुद्दा दायर र कानुनी लडाईबाट जोगाउनु अर्को कारण हो। तपाईं अधिकतम गोपनीयता र सुरक्षा प्रदान गर्न अफशोर कम्पनीहरूको नाममा अफशोर बैंक खाताहरू खोल्न सक्नुहुन्छ। अफशोर बैंक खाताहरू धनीहरूका लागि मात्र होइन। त्यहाँ अमेरिकीहरूको संख्यामा फरक वृद्धि भएको छ जसले आफ्नो पैसा निजी वित्तीय खातामा राख्छन्। यस लेखनको उद्देश्य विषय मा समझ र जानकारी प्रदान गर्नु हो।
एक अफशोर बैंक खाताको गोपनीयता
धेरै जसो अफशोर बैंक खाता क्षेत्राधिकार का कडा गोपनीयता कानून र नियमहरु छन्। यी सुनिश्चित गर्न मद्दतको लागि उनीहरूका निक्षेकर्ताहरू र लगानीकर्ताहरूको पहिचानका साथै सम्बन्धित लेनदेन गोप्य छन्। त्यो हो, आकस्मिक जांच वा prying आँखा तपाइँको वित्तीय मामिलामा पत्ता लगाउन सक्षम हुनेछ। जबकि यो गोपनीयता लगभग पौराणिक छ, यो पूर्ण गोपनीयता र अज्ञात ग्यारेन्टी गर्न सम्भव छैन। विश्वभरका सबै वित्तीय संस्थाहरूमा निहित कानूनी दायित्वहरू छन्। त्यस्तै रूपमा, तिनीहरूले रिपोर्ट गर्नुपर्दछ र संदिग्ध गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा अनुसन्धानको अनुपालन गर्नुपर्नेछ। यसमा अवश्य पनि आतंकवाद, मनी लान्ड्रिंग, वा अवैध लागूऔषध व्यापारको फलहरू सामेल छन्।
यद्यपि धेरै जसो घटनाहरूमा कुनै बाध्यकारी आपराधिक अभियोग लाग्दैन। त्यसो भए, जम्मा गर्ने जानकारी ईर्ष्यालु फेसनमा सुरक्षित छ। यी अपतटीय बैंक खाता न्यायालयहरु अत्यन्त गोप्यता प्रदान गर्नका लागि डिजाइन गरिएको हो, र निक्षेपपूर्वक संरक्षण र जम्माकर्ता जानकारी सुरक्षित गर्न। यो उच्च स्तरको गोपनीयता विशेष गरी उल्लेखनीय छ किनकि यो घरेलु अभियोगबाट सम्पत्तिहरूको रक्षा गर्न सम्बन्धित छ। उदाहरण को लागी, नागरिक मामलाहरु जस्तै तलाक वा लडाई सम्पन्न अदालतहरु मा दैनिक लडाई हो।
यो गोप्य वा जम्मा गर्ने जानकारी जानकारी दिन बैंकको हितमा छैन। यसैले, तिनीहरूले परम्परागत रूपमा मात्र अनिच्छा र केही, कडा परीक्षणको साथ गरेका छन् जुन अनुरोध सरकारी एजेन्सी पूरा गर्दछ। गोप्यतामा चुहावट वा विच्छेदको कुनै आवरणले अन्य सम्भावित खातावालहरूको विश्वास तोड्न सक्छ। त्यस्तै रूपमा, तिनीहरू बैंकि business व्यवसायको एक ठूलो सम्झौता गुमाउन हुनेछ।
अज्ञात र गोप्यताको गहिरा र कडा स्तरहरू सजीलो रूपमा उपलब्ध छन्। एकले सम्पत्ति होल्डिंग सवारीहरू मार्फत गोपनीयता बढाउन सक्छ जस्तै अन्तराष्ट्रिय व्यापार कम्पनीहरू (IBCs) वा अफशोर ट्रस्टहरू। यी उपकरणहरूले "बैंक खाता खोल्न" को तुलनामा संरक्षणको हिमाल प्रदान गर्दछ।
यो लक्ष्य एक वा बढी अफशोर बैंकि accounts खाताहरू खोल्न खोज्ने जो कोही पनि यो हुनुपर्दछ। सम्पत्ति सुरक्षा, अज्ञातता, सुरक्षा, र पहुँचता बीच उचित सन्तुलन प्रहार गर्न यो मार्गनिर्देशन हुनु महत्त्वपूर्ण छ। तपाइँको लागि सही समाधान फेला पार्न एक परामर्शदाता समात्न निश्चित हुनुहोस्।
अपतटीय बैंकिंग को बारेमा अतिरिक्त जानकारी
अफशोर बैंक खाताहरूको लागि लोकप्रिय न्याय क्षेत्र विश्वका विभिन्न भागहरूमा फेला पार्न सकिन्छ। यद्यपि अफशोर बैंक खाता स्वामित्व पाउन अफशोर कम्पनी गठन गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। एक अफशोर कम्पनीको मालिकहरूको लागि सबै भन्दा गोपनीयता प्रदान गर्ने क्षेत्रक्षेत्र अफशोर बैंकि account खाता प्रदायकको रूपमा उही क्षेत्राधिकारमा हुनु आवश्यक छैन। एक मर्सिडीज गाडी चलाउन सक्छ। तर त्यो कारमा मर्सिडिज टायर छैन। यसले सम्भावित रूपमा गुडयेर, फायरस्टोन, मिशेलिन टायरहरूको महाद्वीप लिनेछ।
त्यस्तै, तपाई उत्तम कानूनी उपकरणका साथ क्षेत्राधिकार छनौट गर्न चाहानुहुन्छ। त्यसोभए तपाईं आफ्नो आवश्यकताहरू पूरा गर्ने उत्तम वित्तीय संस्थाको साथ अधिकार क्षेत्र छनौट गर्न चाहानुहुन्छ।
उदाहरण को लागी, तपाइँ नेविस टापु मा एक कम्पनी र स्विजरल्याण्ड मा एक बैंक हुन सक्छ। नेविस कम्पनी कानून स्वामित्वको अधिकतम गोपनीयता प्रदान गर्दछ। स्विजरल्याण्डले बैंक सुरक्षा र वित्तीय गोपनीयताको सब भन्दा बलियो संयोजन प्रदान गर्दछ। तपाईको विशेष आवश्यकताको लागि सहि संयोजन स्थापना गर्न यो महत्वपूर्ण छ।
भीडमा सम्मिलित हुनुहोस्
OffshoreCompany.com अपतटीय सेवाहरूमा विश्व अधिकार हो। संगठनले वित्तीय गोपनीयता र विश्वव्यापी दर्शकहरूको लागि सम्पत्ति सुरक्षा योजनाहरूमा विशेषज्ञता दिन्छ। सन् १ 1906 ०XNUMX देखि कम्पनी यसमा रहेको छ। हामी कुनै पनि सम्भावित ग्राहकलाई विश्वस्त अपतटीय सेवा कोचको सहयोग लिन आग्रह गर्दछौं। तपाईं यस पृष्ठमा फोन नम्बर वा परामर्श फारम प्रयोग गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
एक अपतटीय खाता खोल्नाले तपाइँको पैसा सुरक्षित गर्न एक वैकल्पिक र कानूनी विकल्प प्रदान गर्दछ। यो कम्पनी १ 1906 ०XNUMX देखि "त्यहाँ" छ।
रोबर्ट किओसाकी, विश्व प्रसिद्ध उद्यमी, वित्तीय शिक्षा र न्यूयोर्क टाइम्स बेस्टसेलिंग लेखकले यो भने। "यदि तपाई कतै जान चाहानुहुन्छ भने, पहिले नै त्यहाँ भएको कसैलाई भेट्नु उत्तम हुन्छ।" जब आर्थिक रूपमा सफल व्यक्तिहरू बोल्छन्, सुन्नु प्रायः बुद्धिमानी हुन्छ।
माथि भनिएझैं करिब २.2.7 मिलियन अमेरिकीहरूको अफशोर खाताहरूमा पैसा छ। अमेरिकी राजनीतिज्ञ, धनी लगानीकर्ता र सेलिब्रेटीहरूले एक अर्काबाट फाइदा लिन्छन् अपतटीय बैंकिंग अवसरहरू। यो संख्याले abroad.7.6 लाख अमेरिकी नागरिकलाई विदेशमा बसोबास गर्ने र बैंकि .्ग समावेश गर्दैन, अमेरिकी राज्य विभागका अनुसार। साथै, यो कुलमा समावेश गरीएको छैन, विश्वभरि रहेका अमेरिकी सेनाका व्यक्तिहरू छन्। यसले फरक पार्दैन यदि तपाईं अमेरिकी नागरिक वा विदेशमा बस्ने प्रवासी हुनुहुन्छ। कारण जेसुकै होस्, धेरै व्यक्तिले कानूनी रूपमा एक अपतटीय खाता भएकोबाट लाभ लिन सक्दछन्।
वित्तीय Unsavvy अमेरिका
अमेरिकामा अन्तिम घरेलु वित्तीय आपतकाल २०० 2008 मा भएको थियो। यस समयमा केही ठूला बैंकिंग संस्थानहरू दिवालिया भए। यो अमेरिकाका मेहनती मानिसहरुमा गरिएको जालसाजी अभ्यासका कारण भएको हो। यसले संसारभर शॉकवेभ पठायो। अरबौं डलर बचत र निवृत्तिभरण हरायो। विनाशले धेरै मानिसहरूलाई छोडिदियो, फेरि सुरु गर्नुपर्‍यो। कसले भन्छ कि त्यो फेरि हुँदैन?
त्यो भन्दा पहिले, अमेरिकी शेयर बजार २००० मा क्र्यास भयो। यो अन्यथा "डट कॉम बबल" को रूपमा चिनिन्थ्यो, जुन तपाईं सम्झनुहुन्छ। त्यसपछि अक्टोबर १ famous, १ 2000 19 मा त्यो प्रसिद्ध दिन थियो। हामी त्यो मितिलाई "कालो सोमबार" भन्छौं र अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा ठूलो एकदिवसीय आर्थिक मन्दी हो। यसको परिणाम बजारबाट 1987०० अर्ब डलर हरायो। त्यो भन्दा पहिले १ 500 २ in मा सबैभन्दा ठूलो प्रख्यात वित्तीय महामारी महामन्दी थियो। यस बाहेक अहिले र त्यसबखत धेरै मन्दीहरू छन् जसले करोडौं अमेरिकीहरूको वित्तीयलाई तहसनहस पारेको छ।
यसबाहेक, अमेरिका विश्वमै सबैभन्दा धेरै inण भएको देश हो। राष्ट्रिय debtण आसमान छरितो मा चासो को रूपमा, संयुक्त राज्य अमेरिका मा धेरै अधिक वित्तीय प्रकोप को बाधा पनि। यसले बैंकको पतन समावेश गर्दछ ... जुन तपाईंको पैसा हुन सक्छ। एफडीआईसीमा भरोसा नगर्नुहोस् तपाईलाई जमानत दिनुहोस्। संघीय निक्षेप बीमा निगम (FDIC) एक संयुक्त राज्य सरकारको निगम हो जुन अमेरिकी बैंकमा निक्षेपकर्ताहरुलाई निक्षेप बीमा प्रदान गर्दछ। केवल समस्या यो हो, हो, यो ग्रहमा सबैभन्दा बढी countryण देश द्वारा समर्थित छ।
धनी र सुचित के गर्नुहोस्
यो सर्वव्यापी रूपमा परिचित छ कि तपाईंको वित्तीय पोर्टफोलियोमा विविधीकरण गर्नु सही तरिका हो। तपाईको पैसालाई स्टक, म्युचुअल फन्डहरू, अनुक्रमणिका कोषहरू र रियल इस्टेटमा राख्नु औसत लगानीकर्ताको लागि मात्र केहि विकल्पहरू हुन्। तर यदि ती सबै लगानीहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा छन् भने, तिनीहरू सबै समान सिन्खोल तान्न सकिन्छ। अर्को अमेरिकी वित्तीय पतनको स्थितिमा लगानीहरू उनीहरूको मूल मूल्यको अंशमा संकुचन हुन सक्छ।
यदि त्यहाँ अन्य लगानी विकल्पहरू छन् भने के हुन्छ?
के हुन्छ यदि त्यहाँ लगानी, सुरक्षा र तपाईंको वित्तीय पोर्टफोलियो विविधता को लागी धेरै तरिकाहरू छन्? यसबाहेक, यदि तपाईंसँग आफ्नो लगानीको अत्यधिक गोपनीयता भएको थपिएको बोनस छ भने के गर्ने?
त्यो कहाँ छ अफशोर बैंक खाताहरू भित्र आउ।
अफशोर खाता बजार कति ठोस छ भनेर प्रमाणित गर्न, sh२ ट्रिलियन डलर भन्दा बढी अफशोर खाताहरूमा राखिएको छ। स्यावी लगानीकर्ताहरूले महसुस गर्छन् कि अमेरिका होईन र उनीहरूको पैसा सुरक्षित गर्नका लागि "जानु" हुँदैन। वास्तवमा जहाँसम्म सुरक्षित बैंकहरूको सवाल छ, अमेरिका विश्वको सबैभन्दा सुरक्षित बैंकहरूको सूचीमा कम स्थानमा छ।
हामीले माथि भनेझैं “विश्वको Saf० सफेस्ट बैंक २०१ 50” को ग्लोबल फाइनान्सको सूची अनुसार अमेरिका विश्वको सुरक्षित बैंकहरूको सूचीमा # ,०, # and 2015 र # ks० हो! साना फार्मिंग बैंकहरू, एग्री बैंक, कोब्याक र एगफर्स्ट मात्र अमेरिकी बैंकहरू हुन् जसले सूची बनाएका छन्। अधिकांश अमेरिकी नागरिकले वित्तीय, चेज, सिटी र बैंक अफ अमेरिकाका लागि प्रयोग गर्ने बैंकहरू सूचीमा कतै छैनन्।
तपाईंलाई सोच्दछ ...
वार्षिक मुद्रास्फीति दर भन्दा कम तपाइँको पैसा मा कम ब्याज बनाउने यो इरोड। शेयर बजारमा आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने जोखिमपूर्ण अवसरहरू लिनु भनेको तपाईंलाई आफ्नो आर्थिक लक्ष्यहरू पुग्न सक्ने कुनै तरिका नै छैन।
मर्ने अमेरिकी सपना
सम्भावनाहरू तपाई वास्तवमै दिनदिनै कडा परिश्रम गर्नु हो। तपाईं एक व्यापार को मालिक, बिलहरु तिर्न र आर्थिक जिम्मेवार फैशन मा कार्य गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले छोड्नु भएको पैसा र बचत (र शेयर बजारको दयामा लगानी गर्ने प्रयास) तपाईंको गुँड अण्डा हो। त्यो तपाईको सेवानिवृत्ति हो, र तपाईको राम्रो सपनाको लागि जीवन।
कुनै पनि समयमा, लोभी वकिलहरूले तपाईंको बैंक खाताहरू स्थिर गर्न सक्दछ तपाईंको रकम पहुँचयोग्य छैन। आईआरएस, सम्बन्ध विच्छेद, भुक्तान नगरी मेडिकल बिल, बाल समर्थन मुद्दाहरू वा कुनै फैसलाको साथ प्राप्त समस्याहरू तपाइँको बैंक खाताहरू तपाईंको अन्तर्गतबाट बाहिर फ्याँक्न सकिन्छ।
विवाह र सम्भावित सम्बन्धविच्छेदको कारण पनि आर्थिक विपत्तिमा यो साबित भएको छ कि धेरैले त्यसबाट सुधार गर्दैनन्। किन? किनभने तपाईंको सबै सम्पत्ति अमेरिकामा हुन सक्छ। त्यस्तै रूपमा, ती दृश्य र अदालतहरू र जफत गर्न संवेदनशील छन्, तपाईंलाई गरीब घरमा छोड्दै।
विवाह समाप्त गर्नु भावनात्मक तवरमा पीडादायी छ, हो। तर यसले मानिसहरूलाई आर्थिक रूपमा पनि क्षति पुर्‍याउँछ। सम्बन्ध विच्छेदको कार्यवाही निष्कर्षमा लिनको लागि केहि बर्ष लाग्न सक्छ। एक हजारौं वा लाखौं डलर खर्च गर्न सक्छन्। पछि, यसले तपाईंलाई आफूले बनाएको कुराको केही अंश मात्र छोड्न सक्छ। यस तथ्यको बारेमा आर्थिक सचेत हुनु अझै अर्को कारण प्रदान गर्दछ। यो कडा कानूनी उपकरणहरू बीच अपतटीय खातामा तपाईंको केहि पैसा विनियोजित गर्नका लागि यो अर्को कारण हो। त्यहाँ, तपाईं यसलाई हानिबाट टाढा राख्न सक्नुहुन्छ।
एक अपतटीय खाता खोल्नाले तपाईंलाई आफ्नो पैसा निजी राख्ने स्वतन्त्रता दिन्छ र घरेलु मोचरहरूको लागि संवेदनशील हुँदैन।
सकारात्मक वित्तीय आउटलुक
मिडियाले सामान्यतया अफशोर खाताहरूलाई "कर आश्रय" वा "ट्याक्स हेभन्स" को रूपमा उल्लेख गरेको छ। विगतमा, आईआरएसले अफशोरमा लगानी गरिएको पैसाको कडा जाँच गरेन। किनकी पैसा अफशोरमा लगानी गर्न त्यहाँ धेरै फाइदाहरू थिए। आईआरएसले अब वित्तीय लाभ लिन चाहनेहरूको लागि कडा बनाएको छ - र आईआरएसले आफ्नो हिस्सा चाहान्छ।
२०० In मा, कांग्रेसले विदेशी खाता कर अनुपालन ऐन (FATCA) पारित गर्‍यो। यसमा पहिले जस्तो भनिएको छ कि विदेशमा बसोबास गर्ने अमेरिकी नागरिकहरूले आईआरएसमा कर बुझाउनु पर्छ। के नयाँ थियो तर जे होस्, विदेशमा वित्तीय संस्थाले आफ्ना अमेरिकी ग्राहकहरू उनीहरूसँगै बैंकमा प्रकट गर्नुपर्‍यो। यस सम्बन्धमा देशले सबैभन्दा धेरै समाचारहरू स्वीजरल्याण्डमा पायो। स्विस बैंक खाता थियो, र अझै पनि जबरदस्त कुख्यात छ। स्विजरल्याण्ड एक महान देश हो जहाँ पैसा लगानी वा बचत गर्न। यो बैंकिंग सुरक्षा र लगानी विकल्पहरूको अधिकताको लागि परिचित छ। यी नियमहरू ईश्वरको रूपमा बने। त्यो किनभने यो कुनै मूर्ख व्यक्तिलाई एक अमेरिकी व्यक्तिलाई अफशोर ट्याक्स चोरी आरोप लगाउन को लागी मूर्खता हो। जब उनीहरूले प्रयोग गरेको बैंकलाई रिपोर्ट गर्न बाध्य पारिएको छ, कर चोरी एउटा मुद्दा भन्दा कम कम हुन्छ। यसैले, यसले अमेरिकी जनताबाट पालना गर्दछ जुन धेरै सजिलो हुन्छ।
त्यहाँ दर्जनौं अन्य देशहरू छन्, स्विजरल्याण्ड बाहेक, तपाईंको पैसा लगानी गर्न।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि यो अपतटीय खाताहरूमा बैंकमा पूर्ण रूपमा कानूनी छ। अमेरिकी नागरिकहरूले आफ्नो अफशोर मुनाफा IRS लाई रिपोर्ट गर्नु पर्छ। यो तपाइँलाई कर सिजनको बखत गर्नका लागि व्यायामको एक सरल तह। तर यो पनि नोट गर्नुहोस् कि अफिसोर बैंकिंग कर नियमहरू बुझ्ने CPA र वकीलहरूले सहयोग गर्न सक्दछन्। ती यी नयाँ कानून मा राम्रोसँग वाकिफ छन् र साधारण रिपोर्टिंग प्रक्रिया मार्फत तपाईंलाई हिंड्ने।
आजकल तपाईंको सबै पैसा युएस बैंकि system प्रणालीमा राख्नु भनेको पुरानो, असुरक्षित र वर्दी भएको लगानी हो। तपाईंको बचतहरू किन एक कपटपूर्ण, भ्रष्ट, rigged प्रणाली को दया मा छ?
एक अपतटीय खाता खोल्न गाह्रो छैन। यद्यपि त्यहाँ नयाँ कानूनहरू र हुप्सहरू भित्र छिर्नका लागि छन्, साथै संख्या पनि अपतटीय बैंकहरु जसले अमेरिका, क्यानाडाली वा अष्ट्रेलियाली निक्षेपकर्ताहरू स्वीकार गर्दैनन्। त्यसोभए, अफ्शोर बैंकि the्गको इन-एन्ड-आउटको साथ अनुभवी कम्पनी खोज्न सिफारिस गरिएको छ।
के तपाई अधिक खोज्न चाहानुहुन्छ? यदि हो भने, हामी यहाँ मद्दत गर्न छौं। यस पृष्ठमा एक परामर्श फारम छ जुन तपाईं अहिले पूर्ण गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईलाई अनुभवी सल्लाहकारलाई कल गर्नका लागि नम्बरहरू छन्। यी अवसरहरूको फाइदा लिन स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् र मद्दतको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।